पोखरा टुर जाँदा को स्वर्गीय आनन्द ! - Nepali Sex Story
Home / Nepali Sex Story in English / चिकेका कथा / यौन कथा / पोखरा टुर जाँदा को स्वर्गीय आनन्द !
पोखरा टुर जाँदा को स्वर्गीय आनन्द !
The Reporter September 10, 2017 Nepali Sex Story in English, चिकेका कथा, यौन कथा
कमल र किश्मा, मानिस र घर हरूको अत्यधिक चाप ले भासिए झैँ देखिने त्यो काठमाडौँ सहर छाडेर हरियाली पर्यटकीय स्थल पोखरा पुग्छन् । दिन भरि पोखराका विभिन्न पर्यटकीय स्थल घुमी साँझ-पख एउटा महङ्गो होटल मा रात बिताउन पुग्छन् उनीहरू । मिष्टर एन्ड मिसेज कमल भनेर होटल खाता मा नाम लेखाई उनी हरू रुम तिर लाग्छन् । मिसेज कमल लेख्दा किश्मा लाई एउटा अलग अनुभव हुन्छ । ऊ मन-मनै खुसी हुन्छे । साँझको खाना लिइ सके पछि दुवै कोठामा पुग्छन् । दुवै ले एक ले अर्का लाई नियाल्छन् । के गर्ने, के नगर्ने, असमाञ्जस्यमा पर्छन् । परिस्थिति विचार गरी कमल ले बत्ती अफ गर्छ ।
किश्मा लाई अङ्गालो मा लिन्छ र ओठमा चुम्बन गर्दै सुस्तरी बोल्छ - ‘ सुत न थकाई लागेको छैन ! ‘ कमल ले त्यसो भन्दा किश्मा मौन हुन्छिन् । कमल आफ्नो लुगा फुकाली नाइट ड्रेस लगाउँछ । किश्मा बसि रहेकी हुन्छिन् । कमल ले विस्तारै किश्मा लाई बिछ्यौनामा पल्टाउँछ । दिउँसो कै ड्रेस मा किश्मा ओछ्यान मा सुत्छिन् । कमल किश्मा को नजिकै आएर पल्टन्छ । केही क्षण दुवै मौन रूपमा सुति रहेका हुन्छन् । बोल न किश्मा, के भयो ? – किन चुप लागेकी ! ‘ - कमल बोल्छ । ‘ के कुरा गर्ने भन्नु न, तपाईं नै मेरो छेउमा हुनु हुन्छ, तपाईं भए पछि मलाई सबै पुगि सरी हुन्छ ’ - किश्मा ले भनिन् । ‘ तिमी कति प्यारी छौ है, मलाई कति माया गर्र्छौ तिमी ! ‘ - ओठ मा चुम्बन गरी आफ्नो हातले किश्मा लाई सुस्तरी अङ्गाल्दै कमल ले भन्यो । ‘ तपाईं पनि त मलाई माया गर्नु हुन्छ नि ! मलाई तपाईं जति प्यारो यो दुनियाँ मा कोही लाग्दैन ’ - किश्मा ले पनि कमल को चुम्बन को प्रत्युत्तर फर्काइन् । अब कमल किश्मा को अझ नजिक टाँसिएर सुत्छन् । आफ्नो हात किश्मा को वक्ष मा लगेर स्थिर गर्छ । विस्तारै त्यहाँ चल्मलाउन थाल्छ । ऊ अब किश्मा को मुख भित्र आफ्नो मुख ले के-के खोज्न थाल्छ । किश्मा को शरीर को न्यानो स्पर्श ले कमल लाई उत्तेजित बनाउँदै लग्यो । दिउँसो लगाएको लुगा मा सुतेकी किश्मा को टिसर्ट विस्तारै कमल ले माथि तिर सार्न थाल्छ । टिसर्ट माथि सारि सके पछि ऊ आफ्नो हात ब्रा को हुकमा लगेर चलमलाउन थाल्छ ।
किश्मा ठूलो श्वास फेर्दै हुन्छे । ब्रा को हुक खोल्न अप्ठ्यारो भए पछि किश्मा ले कमल लाई सघाउँछिन् । कमल आफ्नो कार्य मा सफल हुन्छ । अब ऊ आफ्ना हात हरू किश्मा को पुष्ट वक्ष मा ल्याएर स्थिर गर्छ । एउटा सानो बच्चा ले गुडिया सँग खेले झैँ कमल किश्मा का स्तन सँग खेल्न थाल्छ । उत्तेजनाले बेला-बेला किश्मा कमल को ओठ चुस्छिन् । त्यस्तै कमल पनि उसको ओठ चुस्न थाल्छ । कमल हात को औँला ले किश्मा को नाइटो को गहिराइ नाप्छ । जुन किश्मा को पेन्टको टाँकमा चल्मलाउँछ । तुरुन्तै आफ्नो इच्छा मा सफलता पाए पछि किश्मा को पेन्ट तल सार्न थाल्छ । सो कार्य गर्दा कमल लाई किश्मा ले सहयोग गर्छिन् । किश्मा पेन्ट फालेर कमल सँग लपक्क टाँसिन्छिन् । कमल ले आफ्नो चोर औँला किश्मा को योनी मा पसाउँछ । यस बेला कमल को हात ले किश्मा को योनी बाट तरल पदार्थ निस्किरहेको अनुभूति गर्छ । ऊ किश्मा को योनी खेलाउँछ । कुनै पर-स्त्रीको प्रथम पटक सामीप्यता पाएको कमल किश्मा को हरेक अङ्गहरूलाई चाख लिई लिई निरीक्षण गरि रहन्छ । किश्मा बेला-बेलामा उत्तेजना ले कमल को ओठ टोक्दै हुन्छिन् । यस बेला कमल को काम नायक चाखका साथ किश्मा को महत्वपूर्ण अति-गोप्य त्यही अङ्ग सँग जोडिएको हुन्छ ।
किश्मा पनि उत्तेजित हुन्छिन् । केही बेर नबोली कन कमल ले काम सुरु गर्ला भनेर आशा गर्छिन् । तर कमल चाहिँ हातले खेल्न मै व्यस्त भए पछि उनी बोल्छिन् - ‘ के गरिराख्नु भएको राजा, छिटो न आफ्नो काम गर्नुस्, कति मलाई तड्पाइ रहनु हुन्छ ! ‘ ‘ मेरी प्यारी रानी, म तिमी तड्पेको सुन्न सक्दिन, त्यसैले अब आफ्नो काम सुरु गर्छु कमल ले कुरा स्वीकार्छ । किश्मा को हात समातेर आफ्नो लिङ्ग मा ल्याउँछ । आगो बाट हात झिके झैँ गरी किश्मा फुत्त हात झिक्छे । कमल किश्मा माथि उक्लन्छ । किश्मा कमल लाई सजिलो पारि दिन्छे । कमल ले फटाफट आफ्नो काम सुरु गर्छ । लिङ्ग प्रवेश हुना साथ कमल लाई खूब आनन्द आउँछ । किश्मा भने पीडा ले चिच्याउन थाल्छिन् - नाइँ-नाइँ, मैले सकिन छिटो बाहिर निकाल्नुस्…। कमल लाई किश्मा को पीडा सैह्य हुँदैन, त्यसैले कमल ले आफ्नो काम नायक बाहिर निकाल्छ । ‘ के भयो तिमीलाई – किन डराएकी, भन त - ‘ कमल ले किश्मा को गाला मुसार्दै सोध्यो । ‘ तपाईं लाई त मज्जा भयो होला नि, अर्का लाई के भइ राखेको छ, ख्याल गर्नु छैन ! ‘ लाडे बोली बनाएर किश्मा ले भनी । ‘ भन न त मैले के गर्नु पर्छ – म तिमी लाई पीडा भएको सहन सक्दिन क्या ! ’ कमल बोल्छ । ‘ कस्तो साह्रो गरी कुहिना ले थिचेको – यत्रो ठूलो शरीर थामेकी छु । त्यही माथि कुहिना ले थिच्दा अर्कालाई दुख्दैन ! ‘ - किश्मा ले कमल लाई वास्तविकता बताउँछिन् ।
कमल त्यो गल्ती दोहोर्याउँदैन । बडो सतर्क का साथ पहिले झैँ गरी कमल ले आफ्नो काम सुरु गर्छ । आफ्नो नायक लाई लक्ष्य मा पुर्याइ सके पछि कमल तल-माथि गर्दै मच्चिन थाल्छ । हातले उनको सुकोमल स्तन मुसारि रहेको हुन्छ । त्यस्तै चुम्बन पनि गरि रहेको हुन्छ । दुवै आनन्दले सुत्छन् र निदाउँछन् । राति जब किश्मा ब्युँझिन्छिन्, उनलाई थाहा हुन्छ आफ्नो योनी क्षेत्रमा केही सल्बलाइ रहेको छ, जसको उनलाई हल्का आनन्द पनि आइरहेको छ । उनी हात लम्काएर बेड स्वीच अन गर्छिन् । उज्यालो मा देख्छिन् त कमल उनका दुवै तिघ्रा फारेर बीच मा बसेर उनको गुप्त क्षेत्र मा जीब्रो पो चलाइरहेको ! बत्ती बले पछि कमल किश्मा लाई हेरेर थोरै हाँस्छ । किश्मा पनि मुस्कुराउँछे । कमल पुनः आफ्नो कार्य सुरु गर्छ । ऊ योनी को डिलमा आफ्नो जिब्रो चलाउँछ । किश्मा को बच्चा को जस्तो कलिलो योनी मा जिब्रो चलाउन उसलाई खूब मजा आउँछ । किश्मा पनि आनन्द ले कमल को टाउको सुम्सुम्याउँछिन् । केही समय पश्चात् कमल किश्मा का स्तन प्रेम पूर्वक मुसार्दै आफ्नो जिब्रो लिङ्ग झैँ योनी मा भित्र-बाहिर गराउँछ । किश्मा भुतुक्कै भएर सुस्केरा काड्छिन् । उनी भन्छिन्- ‘ कमल, लौन, मलाई त खपि नसक्नु भयो, अब केही गर्नुस् । ‘ किश्मा ले यसो भन्ना साथ कमल फेरि किश्मा माथि चढ्छ । उसले यसो गर्दा किश्मा को आँखा अगाडि कमल को विशाल लिङ्ग देखा पर्छ भने कमल चाहिँ किश्मा को योनी तिर आँखा पुर्याउँछ । किश्मा कमल को लिङ्ग हात मा लिन्छिन् र प्रेम पूर्वक मुसार्दै चुस्न थाल्छिन् । उता, कमल दुवै हात ले किश्मा को योनी मा चलाउन थाल्छ ।
यो क्रिया ले दुवै लाई चरम आनन्द प्राप्त हुन्छ । केही समय पछि दुवै स्खलन को अवस्थामा पुग्छन् । कमल बोल्छ - ‘ किश्मा केही छिन रोक त । ’ ‘ किन राजा ! ‘ कमल को विशाल लिङ्ग मुख बाट निकाल्दै किश्मा बोल्छिन् । ‘ म बग्न लागेँ, त्यसैले के ! ’ कमल ले जवाफ दिन्छ । ‘ मलाई पनि त्यस्तै भइ रहेछ । यही मौका मा काम सिध्याउ न हुँदैन ! ‘ कमल - ‘ यति छिट्टै किन ! ‘ किश्मा - ‘ जागे पछि फेरि गर्ने नि, के आपत छ र ! हामी दुई छँदै छौँ क्यारे । ’ ‘ त्यसो भए गरेर नै सिध्याउने त ! ‘ यसो भन्दै कमल फर्किन्छ र किश्मा को योनी मार्गमा आफ्नो विशाल लिङ्ग लगेर राख्छ । विस्तारै दबाब दिन्छ । लिङ्ग योनी मा पस्छ । किश्मा का स्तन सुम्सुम्याउँछ । विस्तारै प्रहार गर्न थाल्छ । यसरी लयात्मक तरिका ले प्रहार गरेको किश्मा लाई खुब रमाइलो लाग्छ । कमल जोड ले प्रहार गर्न थाल्छ । किश्मा उस लाई उत्साहित गर्दै बोल्छिन् - ‘ हो, अझ जोड ले प्रहार गर्नु, हो-हो, यसरी नै।’ किश्मा यसो भन्दै कमल लाई हौस्याउँछिन् । दुवै उत्तेजनाले कराउँछन् । र, केही थप घात-प्रतिघात पछि दुवै शिथिल हुन्छन् । त्यस पछि यी दुई प्रेमी जोडी आनन्द पूर्वक टाँसिएर सुत्छन्...
पोखरा टुर जाँदा को स्वर्गीय आनन्द ! Reviewed by The Reporter on September 10, 2017 Rating: 5